छवि सुधार्न राजनीति नै सुध्रिनुपर्छ | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ श्रावण १६, शुक्रबार १२:३९ गते
रञ्जन कोइराला जो अहिले राष्ट्रियरुपमै घृणायोग्य पात्र बनेका छन्, जसले पद्धति र व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरे । जुन आपराधिक कर्मद्वारा सुनौलो सपना बुनेका थिए त्यो पापाचार थियो । भनिन्छ, भगवान्का द्वारमा बेर हुन्छ तर अँध्यारो हुँदैन । हो, त्यस्तै प्रमाणित भएरै छाड्यो र उनी हत्या प्रमाणित भई जेल जीवन भोगिरहेका थिए, विगत आठ वर्षबाटै । यसैले पतिबाट मारिएकी पत्नीको दिवङ्गत आत्माले शायद आंशिकरुपमा भए पनि न्याय पाएको सम्झिरहेथ्यो ।
जे होस्, रञ्जनको पापको घडा फुटिसकेको थियो र उनी कारावासको जीवन भोगिरहेथे । तर, अनायास अदालतमा पुनर्याचिका र दर्ता गर्ने तथा फैसला गर्ने÷गराउने जुन कार्य भयो त्यो स्वतःस्पूmर्त नभई प्रायोजित र नियोजित रहेको जस्तै देखियो भन्दै सर्वत्र आलोचना गरियो । अर्को एउटा महाराजगञ्ज हिट एण्ड रन घटनाका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्ने फैसला पनि उत्तिकै विवादास्पद बन्न गएको छ ।
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त इजलासले उक्त सर्वस्वसहितको जन्मकैदको सजाय घटाएर आठ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकिएकाले अब बाँकी कैद सजाय भोग्नु नपर्ने भन्दै फैसला सुनाएको थियो । यसपछि उनी कारागारबाट मुक्त भएका थिए, गत बिहीबार नै । पहुँच वा अन्य कुनै प्रभावका आधारमा गरिएको निर्णयप्रति विभिन्न नारी अधिकारवादी संघसंस्था र दलका भगिनी संस्थाहरुले विज्ञप्तिमार्फत जनाए विमति । विवेकशील नेपाली दलकी रञ्जु दर्शनासहितका केही युवायुवतीहरु भने बानेश्वरमा ‘शुक्रबार साँझ प्लेकार्ड र ब्यानरसहित धर्ना दिन पुगेपछि रञ्जु दर्शनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।
यस फैसलाको राजनीतिक नेतृत्वदेखि बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणले समेत चिन्ता र चासो जताए र अद्यापि यो क्रम जारी नै छ । जुन चिन्ता र चासोमा न्यायालय र न्यायमूर्तिको साख गिर्ने र जनताको विश्वास डग्मगाउने भय व्यक्त गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरुमा समेत यसरी नै चिन्ता र चासो जताइयो निकै । सर्वत्र न्याय मरेको चिन्ता व्यक्त हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर विडम्बना, रक्षक नै भक्षक भएपछि के होला त्यसै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ !
त्यो दुष्कल्पना भोगिरहेछ वास्तवमै यो मुलुकले । यथार्थमा आएर हेर्दा प्रहरी प्रशासन भनेको चाहे सशस्त्र, चाहे नेपाल प्रहरी वा नेपाली सेना, सबै देश र जनताकै हित सम्पादनार्थ स्थापित सरकारी संस्था हुन् । तिनैमध्ये सशस्त्रका डिआइजीसम्मको तहमा पुगेका सुरक्षाकर्मीले कानुनका यावत् धारा र दफा पढेकै हुन्छन् नै र आपराधिक कर्म, त्यसका प्रकृति प्रकार आदि इत्यादि गहिरो गरी जानेबुझेकै हुन्छन् । तिनैले श्रीमतीको हत्या गरी त्यसलाई ससानो एकाइमा परिणत गरी जलाउने र सम्पूर्णरुपले सबुद नाश गर्ने र बेपत्ता भएको नाटक गर्ने योजना अत्यन्त डरलाग्दो छ ।
अदालत र प्रहरी प्रशासन भनेका यी दुवै एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । अझ न्यायप्रति जनतामा एकखाले गहिरो विश्वास हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य ! अदालतमा तेत्तीस हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भई फैसला कुरेर बसेका छन् । तीमध्ये कतिपय युवाकालमा दर्ता भएका छन् । अहिले मुद्दा दर्ता गर्नेहरु जीवनको उत्तराद्र्ध यापन गरिरहेका छन् ।
सरस्वती संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालय, गिरूवारी नवलपुरमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद बस्याल । उहाँ स्थायी हुँदा जागिरको हद उमेर ६३ वर्षको थियो । तर, पछि उहाँ जागिरै छँदा त्यो शिक्षा नियमावली संशोधन भई जागिरको हद उमेर घटेर ६० भयो । ६० भएपछि उहाँको पेन्सनका लागि ३ वर्ष पुगेन र पेन्सन नपाउँदै २०५७ सालमा अवकाश लिन बाध्य पारिएपछि उहाँले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनुभयो । तर, अझै मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन । उहाँ पनि बाद्र्धक्य जीवनमा फैसलाको आशा राखेर कुरिरहनुभएको छ अझै ।
यस्तै कैयौँ मर्कामा पारिएका मान्छेहरुको स्थिति के होला ? जो अझै न्यायको पर्खाइमा खुनका आँसु पिएर बाँचिरहेछन्, कुनै न कुनै दिन त न्याय पाइएला नि भन्दै । विडम्बना, ती मुद्दाहरु तारेखमै सीमित छन् । तर, सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भई कारागारमा जेलजीवन यापन गरिरहेका रञ्जनको मुद्दा ब्युँताएर उनीप्रति सहानुभूति राख्नुपर्ने दृष्टि त्यति पच्ने देखिन्न ।
लोकतन्त्रमा जनता नै शासनका सूत्रधार, अनुगमक र नियन्ता पनि हुन् । चाहे त्यो व्यवस्थापिका होस्, कार्यपालिका वा न्यायपालिका नै किन नहून्, सबै जनताद्वारै सृजित, पुष्पित र पल्लवित संस्थाहरु हुन् । तिनीहरुमाथि जनताको गहिरो लगाव हुन्छ र सूक्ष्म दृष्टि रहिररहेको हुन्छ । यद्यपि, हाम्रा जस्ता मुलुकहरुमा यी संस्थाहरुले उल्टै रजगज गर्छ, तर स्वस्थ र समुन्नत लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा स्रष्टामाथि नै बलपूर्वक शासन चलिरहन्छ । जनताबाट अनुमोदित दलीय व्यवस्थाबाटै यस्तो स्थिति हुनुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सौन्दर्य मान्न सकिन्न । दलीय व्यवस्था भन्नु नै वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली नै हो । राजनीति जबसम्म मूल्य र मान्यताको लिकमा हिँड्दैन तबसम्म जनताले आदर्शपूर्ण न्याय पाउने आशा राख्नु एकखाले दिवास्वप्नमात्रै हो ।
जहाँ न्याय परिषद्मा राष्ट्रपति वा प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, बारहरु रहेका हुन्छन् जसले जस्केलाबाट छिराएर न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्ने, भागबन्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने, भागबन्डा र गुटगत आधारमा भाग पु¥याउन राजदूतहरु नियुक्त गर्ने, आपूmअनुकूलका व्यक्तिलाई संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त गर्ने परिपाटीमा कस्तो न्यायसेवाको आशा राख्न सकिन्छ र ? र, कसरी संस्थाहरुको साख, गरिमा र छवि बनिरहन सक्छ र ?
यस्तो विषम परिस्थितिभित्र कम्तीमा पनि न्यायको धुकधुकीमात्रै भए पनि जोगाइराख्न आआप्mनो ठाउँबाट सर्वसाधारण र केही दलहरुले पहलकदमी लिएको देखिन्छ । अब धुकधुकीमात्रै होइन स्वस्थ र सबल तुल्याई चुस्त र पारदर्शी न्याय प्राप्तिका निम्ति यो नियुक्ति प्रणाली नै समस्याको जड रहेकाले त्यहीँबाट सर्वप्रथम सच्चिनु र सच्याउनु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा, जो न्यायमूर्तिका रुपमा आए पनि उहाँहरुले यो प्रवृत्तिको निरन्तरता भोग्नुको विकल्प देखिने छैन ।
यद्यपि, जनताले न्यायालय र न्यायमूर्तिको साख र प्राणत¤वमाथि जनताको विमति र प्रहार होइन जस्तो लाग्छ । यस्तो परिवेश सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति र अहिले हुर्किएको विकृत संस्कृतिको अन्त्य होस् र स्वच्छता तथा स्वस्थताकै निम्ति रहेको लाग्छ । यही प्रणाली र पद्धतिलाई सबल र सशक्त देख्न खोज्ने, यसैलाई असाध्यै माया गर्नेहरुबाट गरिएका टीकाटिप्पणीलाई मनन गर्दै सम्बन्धित पक्षले आप्mनै विधि, पद्धत्ति र प्रक्रियामार्फत नै त्रुटि सच्याउन र विधिवत् मार्गमा अग्रसर भई न्यायनिरुपण होस् भन्ने आशय त्यहाँ रहेको प्रतीत हुन्छ ।
यसर्थ, जनस्तरबाट उठिरहेको आवाजप्रति सङ्केत गर्दै अदालतले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । त्यसमा भनिएको थियो– ‘न्यायसम्पादनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप अदालतबाटै हुने मान्यतालाई संवैधानिक, कानुनी र न्यायिक अभ्यासका माध्यमबाट स्थापित गरिएको व्यहोरा विदितै छ ।’ अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको कामकारबाही र न्यायसम्पादनमा प्रभाव पर्ने गरी समाचारको प्रवाह गर्न टीकाटिप्पणी नगर्न सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरिएको देखिन्छ ।
हुन त, विगतमा यस्ता कैयौँ परिघटनाहरु भएका छन् अदालती निर्णयहरुमा । जसले अदालतले कैयौँपटक आफ्नो गरिमा त के लाज पनि जोगाउन सकेको देखिन्न । कतिपय मुद्दाहरुमा न्यायालयले राजनीतिक रङ देखाएको पनि छ । कतिपय मुद्दाहरुका कारण न्यायमूर्तिले महाभियोग सामना गर्नु परेको पनि छ ।
यसर्थ, न्यायालयले आँखामा कालोपट्टी बाँधेर होइन कतिपय न्यायालयबाहिरै पैmसला तयार पारी अदालतभित्र वाचन गर्नेजस्ता कार्यहरु नाटकीय ढङ्गमा भइरहेको छ भन्ने धेरै विश्लेषकहरुको टिप्पणी सुन्नमा आएको छ । अझ आर्थिक सन्दर्भमा न्यायमूर्तिहरु बिकेको र सही समयमा सही फैसला दिन नसकेका खबरहरु पटकपटक बजारमा आएकै छन् । यस्ता दुःखद खबर घट्ने र बाहिर आउने परिवेश निर्माण हुनुहुँदैन । यसमा सम्बन्धित सबै चनाखो, जिम्मेवार र निस्वार्थ भई आआप्mनो संस्था र पदको साख, छवि र गरिमा जोगाउने दिशामा नै प्रणाली, विधि, पद्धति र कार्यशैलीमै रचनात्मक परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।